Soo dejisan UR 81.1.4044.9 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: UR
UR – browser a diiradda on ilaalinta xogta qarsoodi user inta lagu guda jiro fankooda internetka. software waxay leedahay sifooyinka loo baahan yahay in ay si raaxo leh joogo internet-ka, la tabs iyo bookmarks shaqeeyaan, download faylasha, Mozilla bogga, iwm UR ka digay ku saabsan internetka laga shakiyo ka hor booqashada iyo files halis la fayrusyada ka hor soo degsado. browser ayaa u saamaxaaya in ay reserved homepage sida aad jeceshahay. UR bixisaa heer sare ah ilaalinta gaarka ah user ah ay sabab u tahay ku furid ah ee cookies xisbiga saddexaad. UR ayaa module ka dhisay-in si loo joojiyo xayaysiinta, hubi rating ammaanka websites ah iyo isticmaalaan VPN.
Joojinta oo ka mid ah cookies xisbiga saddexaad-
Digniinaha ku saabsan websites ka shakiyaan iyo files halis ah
Home page shaqsinimo
Soo dejisan UR
Faallo ku saabsan UR
UR Xirfadaha la xiriira